चैत्य वन्दना तथा स्थापना , प्राचीन नमोबुद्ध चैत्यः | MahaGuruKhabar || Mahaguru Media Network Pvt. Ltd.
Home लेख चैत्य वन्दना तथा स्थापना , प्राचीन नमोबुद्ध चैत्यः
चैत्य वन्दना तथा स्थापना , प्राचीन नमोबुद्ध चैत्यः
चैत्य वन्दना तथा स्थापना
लेखक ः केदार शाक्य
वन्दामि चेतीय सव्वं, सव्वठानेसु पतिटिठ्तं ।
सारीरिक धातु महावोधि,बुद्धरुप सकलं सदा ।।
सबै स्थानमा प्रतिस्थापित भएका चैत्यहरुलाई,
भगवान बुद्धका शारीरिक धातुलाई,
महावोधि वृक्षलाई र सबै बुद्धरुपलाई
म सँधै वन्दना गर्छु ।
प्राचीन नमोबुद्ध चैत्यः
बुद्धचैत्य वन्दना र निर्माण परम्परा कहिलेदेखि कसरी सुरु भयो भन्ने सम्बन्धमा यसको अलग र विशेष इतिहास छ । बौद्ध साहित्य बौद्ध वाङ्गमय अनुसार एकदिन जगत हितार्थ भगवान बुद्ध आयुष्मान आनन्द सहित थुप्रै शिष्यहरु साथमा लिएर गाउँ गाउँ,निगम निगम,जनपद जनपद, नगर नगर तथा देश देशान्तर चारिका गर्दै पाञ्चाल भनिने देश नजिकै गन्धकुट पर्बत पुग्नु भयो । त्यो पर्बत अत्यन्त हरियालीयुक्त, शोभायमान, शान्त र अतिरमणीय थियो । मनलाई आनन्द दिने किसिमको वातावरण थियो । यात्रा गर्दै जाँदा त्यहाँ पुगेपछि भगवान बुद्धलाइ एकछिन् बिश्रामगर्ने इच्छा भयो । भगवानले आनन्दलाई भन्नुभयो । हेर, त आनन्द, यो वन रहेको पर्बत कति शान्त, अनन्ददायक र मनै लोभ्याउने खालको छ । अनेक थरिका रंगबिरंगी फूलहरु फुलिरहेका छन् । अनेक जातका फलहरु फलिरहेका छन् । यस्तो वनमा त हामी बास बसे पनि हुन्छ ।
भगवान बुद्धले यति आज्ञागर्नु भएपछि सँगै चारिका गरिरहेका शिष्यहरुले भगवानलाई आशनका लागि ठाउँ मिलाई दिए । उनिहरुले विन्ति गरे । भगवान एकछिन् शरीर सितल पार्नुहोस् ।
भगवान बुद्धले त्यसपछि आसन ग्रहण गर्नुभयो । मर्यादाक्रम अनुसार सबै भिक्षुहरुले पनि आशन ग्रहण गर्नुभयो । भिक्षुहरुले बुद्धलाई बिन्ति गर्नुभयो । भगवान, तपाइँले आज्ञागर्नु भए झै यो वन साँच्ची नै मनमोहक छ । मनलाई शान्ति र आनन्द दिनेखालको छ । त्यसैले यस्तो निर्वाणमार्गमा जानलायक मानिसहरुका लागि हित कल्याणहुने खालका धर्म वचन आज्ञा भए बेस हुने थियो ।
भिक्षुगणको यस्तो विन्ति सुनेर भगवान बुद्धबाट आज्ञा भयो । हे, भिक्षुगण, परापूर्बकालमा अत्यन्त दुष्कर चर्यागरी गएका एक वोधिसत्वको जीवनचर्या सुन्नेभए म भन्छु । आऊ तिमीहरु सुन । भगवान बुद्धबाट यति आज्ञा भएपछि खुशी हुँदै सबै भिक्षुहरु उत्सुकताबस विनम्र भएर रमाए । हे, शाक्यसिंह, धन्य हाम्रो अहोभाग्य भन्दै भिक्षुहरुले विन्ति विसाए । किनभने जसले जगत हितार्थ दुष्करचर्या गरी जानुभयो त्यस्ता महापुरुषको जीवन बृतान्त सुनेर महानज्ञान वचन सुन्ने, बुझ्ने अवसर मिल्ने छ ।
भगवान बुद्धले आफ्नो आशनबाट भूमिलाई तीन पटक हातले स्पर्श गर्नुभयो । बुद्धले यसरी तीनपटक भूमिस्पर्श गर्नुभएको स्थान फुटेर एउटा चैत्य माथि उठेर आयो । यसरी भूमिचैत्य सृष्टि भएको देखेर आनन्द भिक्षु प्रमुख सबै भिक्षुहरु अत्यन्त आश्चर्य चकित भए । चैत्यको दर्शन पाएर आश्चर्य भएका भिक्षुहरुले भगवानलाई विन्ति गरे । भगवान, यो चैत्य कसरी निर्माण भयो ? यसबारे पनि बताइ दिनुभए बेसहुने थियो । भगवानबाट कृपापूर्बक आज्ञा होस् ।
भिक्षुहरुले यसरी विन्ति गरेपछि महाकारुणिक तथागतबाट आज्ञा भयो । भिक्षुहरु, ध्यानपूर्बक सुन । यस बिषयमा म बिस्तारपूर्बक बताउँछु । भिक्षुहरुलाई सम्वोधन गर्दै बुद्धले भन्नुभयो । उपस्थापक आनन्दलाई हेर्दै भगवानबाट आज्ञा भयो । हेर, आनन्द, यो चैत्य भित्र ठूला महापुरुषको अस्तिधातु हुनुपर्छ । जाऊ, चैत्यभित्र प्रवेश गर ।
बुद्ध वचन अनुसार आयुष्मान आनन्द, चैत्यभित्र पस्नु भयो । चैत्यभित्र फिटकिरीको तेज समान सेतो चम्किलो अस्तिधातु देखियो । यस्तो तेजिलो चम्किलो अस्तिधातु देखेपछि भिक्षु आनन्द अस्तिधातु नलिइकन बाहिर निष्कनु भयो । बाहिर निष्किएर भिक्षु आनन्दले भगवानलाइ बिन्ति गर्नुभयो । भगवानले आज्ञागर्नु भए झै चैत्य भित्र अस्तिधातु छ । अस्तिधातु चम्किलो बस्तु झैं छ । चम्किलो तेजबाट बिष्मित भएर भगवानलाई बिन्ति गर्न आएँ । यस्तो अद्भूत चम्किलो बस्तु मैले पहिले कहिल्यै दर्शन गरेको छैन ।
आनन्दको कुरा सुनेर मुसुमुसु हास्ँदै बुद्धले भन्नु भयो । जाऊ, आनन्द अस्तिधातु लिएर आऊ ।
भिक्षु आनन्द भगवान बुद्धको आज्ञा पाएर फेरि चैत्यभित्र पस्नु भयो । अस्ति लिएर बाहिर आउनु भयो । अस्तिधातु भगवान बुद्धको समक्ष राखेर आनन्दले विन्ति गर्नु भयो । हे ! शाक्यसिंह यो अस्तिधातुको महिमा हामीलाई थाहा छैन । भगवानबाट यस बिषयमा आज्ञा होस् । त्यसपछि बुद्धले आनन्दको मुख हेर्दै आज्ञा भयो । हे ! भिक्षुगण यो अस्तिधातु अरु कसैको हैन । भरखरै सुत्केरी भएकी भोकले प्राण जान लागेकी निरीह बघेनीको जीवन रक्षा खातिर जगत कल्याण र सत्व प्राणीहरुका उद्धारका लागि पहिलेको एक जन्ममा मैले आफैले दानपरमत्थ पारमिता पूर्णगर्दाको बखतको हो ।
यसरी अस्तिधातु महिमा सुनाइसकेपछि भगवान बुद्धबाट सबै भिक्षुगणलाई अस्तिधातु दर्शन गराउनु भएपछि पुनः आज्ञा भयो । जाऊ आनन्द, यो अस्तिधातु फेरि पहिलेकै स्थानमा राखेर आऊ । भिक्षु आनन्दले अस्तिधातुलाई एकपटक नमस्कार गर्नु भयो । अनि जहाँबाट ल्याएको हो त्यहीं लगेर राख्नु भयो । त्यसपछि बुद्धले सबै भिक्षुगणलाई एकाग्र भई महासत्व चर्या सुन्न आज्ञा भयो ।
बोधिसत्वाअबदानमाला अनुसार परापूर्बकालमा गन्धवती नामको एक नगर थियो । महारथ नामका राजा थिए । यी राजा न्यायप्रेमी,नीतिवान,शास्त्रविद्या आदी निपुण,महापराक्रमी,दया करुण,त्याग एवं धर्मात्मा थिए । उनकी रानीको कोखबाट महाप्रसाद,महादेव र महासत्व नामका तीन भाइ पुत्रहरु थिए ।
एकदिन तीनैजना राजकुमारहरु राजासंग आज्ञा लिएर वन विहारमा निष्किए । राजाले आफ्ना प्रिय पुत्रहरुको इच्छा अनुसार वनक्रिडागर्ने अनुमती प्रदान गरे । वनमा घुम्दाघम्दै महासत्व एकजना चाहिं बाटो अलमलिएर बघेनी सुत्केरी भएको ठाउँमा पुगे । बघेनी भोक प्यासले गर्दा हिंडडुल गर्नसक्ने अबस्थामा थिएनन् । तीनवटा डमरुहरु आमाको दूध चुसी रहेका थिए । तर दूध आइरहेको थिएन । निरीह बघेनी धेरै दिनदेखि खान नपाएर मर्नेअबस्थामा पुगेका थिए । महाकारुणिक महासत्वले भोकाएकी बघेनी र उनका डमरुहरुको ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने विचार गरे । यो कारुणिक दृष्य देखेर तीन डमरु र उनिहरुका भोकाएकी आमाको ज्यान बचाउन महासत्वले आफ्नो शरीरको मासु काटेर बघेनीलाई खुवाए । चार जनाको ज्यान बचाए । यसरी महासत्व राजकुमारले आफ्नो दानपारमिता पुरा गरेका थिए ।
अरु राजकुमारहरु सकुशल घर फर्के पनि महासत्व नफर्के पछि उनको खोजी भयो । आखिरमा महासत्वले लगाएको वस्त्रबाट महासत्वको पहिचान भयो । उनको अस्तिधातु एकत्रगरी राजाले चैत्य निर्माण गर्न लगाए । यो घटनापछि कालान्तरमा महासत्व राजकुमार सिद्धार्थ गौतम भएर पुनः जन्मिएपछि अन्ततः आफ्नो अनन्त दानपुण्यकार्यको फलस्वरुप उनलाई बुद्धत्वलाभ भयो ।
यो अवदानसंग कालन्तरमा नमोबुद्धलाई गाँसेर दर्शनपुजन गर्ने परम्परा छ । वर्तमानमा नमोबुद्ध चैत्य वोधिसत्वको पारमिता पुरागर्ने सिलसिलासंग गाँएको छ ।
यस प्रसंगबाट के बुझ्न सकिन्छ भने चैत्य निर्माणकार्य शाक्यमुनि बुद्धको समय भन्दा अगाडि देखि नै प्रचलनमा थियो । वोधिसत्व सिद्धार्थ कुमारले कपिलबस्तु दरवारबाट महाभिनिष्क्रमण पछि उनले अनोमा नदी किनारमा रहेको चैत्य सन्मुख आफ्नो चुडाकर्मगरी श्रमणधर्म अपनाएको इतिहास छ । यसलाई विचारगर्ने हो भने शाक्यमुनि बुद्धको आगमन हुनुभन्दा पनि अगाडिदेखि नै बुद्धचैत्यको प्रादुर्भाव भइसकेको देखिन्छ ।
नेपालमा महायानी परम्परा अनुसार जगत हितार्थ स्वयम्भूमहाचैत्यको प्रभाव बौद्ध संस्कृतिमा प्रत्यक्ष परेको छ । चिभा अर्थात चैत्यका सम्बन्धमा अध्ययनगर्दा संक्षेपमा यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ । स्वयम्भूमहाचैत्यको सुच्छ्म रुप नै चैत्य वा चिभा हो । यो चिभाको परिकल्पना आकाशमा देखिने तीन तारा अर्थात त्रिभुजा आकारमा देखिने नक्षेत्रलाई पनि चिभा नौ वा चिभा द्य भन्ने चलन छ । बाहा पुजा,चैत्यपुजा गर्ने बौद्ध संस्कृतिले जनमानसनमा निकै गहिरो स्थान लिएको छ । जगत हितार्थ जगत कल्याणका लागि महाकरुणाको प्रतिक नै बुद्ध स्वरुप चैत्य हो ।
एक पटक भिक्षु सुदर्शनले चैत्य पुजागर्नेहरुसित सरिक भएर आफै गणना गर्नुभएको थियो । कीर्तिपुर क्षेत्रमा १३० वटा चिभा छ । चिभासंगै धर्मधातु पनि राख्ने चलन छ । अधिकांश चिभाको पूर्बदिशामा धर्मधातु राख्ने चलन छ ।
नेपालमा चिभा बनाउने शैली चैत्यगर्भको माथि १३ खण्ड लाई त्रयोदश भुवन भनिन्छ । अलग ढुंगाको चैत्य गर्भको ग्वः अलिकति गहिरो बनाइ चुकुल राख्ने जस्तै गाँसेर राखिन्छ । यसले गर्दा अधिकांश पुराना चिभाको गजुर नभएको देखिन्छ । चिभाको पाषाण शैली अनुसार अधिकांश स्थानमा यसरी नै पञ्च बुद्धका चार दिशामा मुर्तिहरु राखिएको देखिन्छ । चार दिशामा चारतिर फर्काएर राखिएका पंचबुद्धहरु स्वयम्भूमहाचैत्य कै सानो रुप हो । स्वयम्भू महाचैत्य नेपालको बौद्ध संस्कृतिको मुल स्रोत हो ।
ललितपुरको तबहालको चैत्य जस्तै यी ध्यानी बुद्धहरुको दिशा अपवाद स्वरुप भएको कतै देखिंदैन । जुन जुन चैत्यमा अभिलेख छ तिनीहरुमा नेपाल भाषामा नेवार लिपि वा देवनागरिकमा हुन्छ । अर्थात गणबहालको लिच्छवीकालीन पाषाण चैत्य जस्तै यस क्रममा पनि कतै लिच्छवी लिपि हुने जिज्ञासा भए पनि हालसम्म देखिएको छैन ।
बलम्बु र यसका आसपासको क्षेत्र लिच्छवीकालको विशाल क्षेत्र मानिन्छ । विहारमा भएको लिच्छवीकालीन अभिलेख –जुन ललितपुरको पुरातात्विक बगैंचामा राखिएको छ । यस किसिमको लिच्छविकालीन चैत्य वा बुद्ध मुर्ति देखिंदैन ।
चैत्यको शैली पनि कीर्तिपुर र चोभारलाई छाडेर कतै लिच्छवी शैलीको अर्थात बौद्ध भाषामा अशोक चैत्य कतै देखिएको छैन । कीर्तिपुर क्षेत्रको चैत्य परिक्रमा सबै घुम्दा ११।१२ घण्टा लाग्ने गरेको छ । चैत्य पुजा घुम्न ललितपुरको मतया भन्दा पनि कठिन अनुभव हुन्छ । जे भए पनि नेपालको बौद्ध संस्कृति बाहा पुजा,चैत्य पुजा,धर्मधातु पुजा इत्यादी सांस्कृतिक परम्परालाई जोगाइ राख्ने काम गरिराखेको छ । सरकारी स्तरमा संरक्षण जे जस्तो भए पनि जनस्तरमा चाहिं बुद्धश्रद्धा र भक्तिलाई निरन्तरता दिंदै आएको छ ।
कीर्तिपुर,भाजंगा,बागमती,चोभार,पांगा,नगा,छुँगाँ,मच्छेगाँ, चापाख्य, बोसी गाँ,ल्वंह गाँ,मातातीर्थ,मारि गाँ, पानी घाट,थक्वा,केपुलिचा,बलम्बु,सतँ गाँ,बल्खुमा भएको चैत्यमा घुमेर चैत्य पुजा गर्ने चलन कीर्तिपुरबासीमा छ । यसरी गरिने चैत्य पुजालाई भगवान द्य सिइक वनेगु भन्ने चलन छ । यसै क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परिसर संगै रहेको कुशेस्वर महादेवको हातामा कीर्तिपुर निवासी व्रह्म महर्जनबाट धर्मचित्त श्रद्धा उत्पन्न भई २०७१ सालमा निर्माण सम्पन्न गर्नु भएको चैत्य तथा धर्मधातुले बुद्ध धर्म संस्कृतिलाई चिरस्थाइ बनाइ राख्नमा सहयोग मिलेको छ ।
गौतम बुद्ध परिनिर्माण हुनुभएको दुइसय बर्ष पछि पाटलीपुत्रका मगध सम्राट अशोकले बुद्ध अस्तिधातुहरु संकलनगरी चौरासी हजार चैत्य निर्माण गरेको इतिहास छ । चैत्य भगवान बुद्धको प्रतिरुप हो । प्राचीनकालमा ललितपुर नगरको चार दिशामा चार युगको प्रतिक स्वरुप सम्राट अशोकले चैत्य निर्माण गराएका थिए । त्यसलाई जनबोलीमा अहिले अशोक चैत्य भनिन्छ । लगनखेल,पुलचोक र इमाडोलमा अद्यापि चैत्य देख्न सकिन्छ । यस्ता प्राचीन चैत्यहरुको उचित संरक्षण हुन सकेको छैन । अतिक्रमण बढेको छ । इमाडोलको अशोक चैत्यको शीर्ष भागमा सिमेण्ट प्रयोग गरी चैत्य निर्माण गरेको देखिन्छ । यो कार्य अनुचित छ । प्राचीन सम्पदामाथि कसैले पनि अनुचित कार्यगर्नुृ हुँदैन । यस्तो कार्यलाई धार्मिक पनि मान्न सकिंदैन । चैत्य परिक्रमागर्ने बाटो अतिक्रमण भएर निजी पानीको टंकी बनेको छ ।
वास्तवमा धर्मचित्त उत्पन्न भएकै हो भने त्यस्ता प्राचीन संपदास्थलमाथि अतिक्रमित हुनेगरी नबनाई कुनै मन्दिरको परिसरमा, खुल्ला सार्बजनिक ठाउँमा सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा चैत्य निर्माण गर्नु उचित हुन्छ । यसरी निर्माणगर्न सकियो भने मात्र धार्मिक कार्य मान्न सकिन्छ । चैत्य निर्माणकार्य संगै भगवान बुद्धको उपदेश अनुसार बुझेर धार्मिक आचरण तथा व्यवहार अपनाउनु नै धर्म हो ।
काठमाडौ उपत्यकाका कतिपय सार्बजनिक स्थानहरुमा टोल टोलमा,बाटोघाटोमा बाहा बहीहरुमा प्राचीनकालदेखि अहिले सम्म पनि बुद्ध प्रतिमा,चैत्य निर्माण हुँदै आएका छन् । तिनीहरुको दर्शन पुजन पनि निरन्तर हुँदै आएको छ ।
यही आधारमा बिभिन्न स्थानमा धर्मचित्त उत्पन्न भइ लोक हितका लागि स्थापना भएका बुद्ध प्रतिमा, बुद्ध चैत्य तथा धर्मधातुको आफ्नो विशेष्ता छ । करुणामयी भगवान बुद्धको सत्यधर्म तथा पुण्यको प्रभावले जगत कल्याण तथा देशमा सदा शान्ति अमनचैन कायम रहोस् भन्ने शुद्धचित्तले कामनागरी निर्माण भएका यस्ता चैत्य तथा बुद्ध प्रतिमाले नेपालकै बुद्ध,चैत्यहरुको संख्यामा थप योगदान पुगेको छ । यसको दर्शन पुजनले सबैको हित सुख र असल मार्गमा लाग्न सबैलाई सदासर्बदा अभिप्रेरणा मिलिरहोस् भन्ने कामना निहित हुन्छ ।
चैत्यको गर्भमा अन्न, द्रव्य,दाम,चैत्य निर्माणकर्ताका दिवंगत आफन्तको अस्तिधातु केश आदी राख्ने चलन छ ।
बौद्ध साहित्य अनुसार प्रारम्भमा बुद्धको प्रतिक पुजा नै प्रचलित थियो । स्तुप,बुद्धको प्रतिक थियो । यी प्रतिक स्तुपहरु चार प्रकारका थिए ।
३.घटनापरक अथवा उद्देशिक स्तुप र
४.पुजापरक स्तुप ।
शारिरीक प्रतिक अन्तरगत शरीर धातु (अस्ति,नङ्ग,केश ) सम्बन्धी स्मारक चैत्य र स्तुप निर्मित भएका थिए । पारिभौगिक प्रतिक त्यस्ता थिए जसको परिभोग बुद्धले गरेका थिए । जस्तोः पिण्डपात्र,छत्र,चिवर,वोधिमण्डप आदी । घटना परक स्तुपहरु त्यस्ता थिए जो बुद्धको जीवनकालसंग कुनै न कुनै महत्वपूर्ण घटनासंग गाँसिएका थिए ।
तिव्वती बौद्ध साहित्य अनुसार सुरुमा निर्मित यी घटनापरक स्तुपहरु ८ थिए । बुद्ध, चैत्य र यससंग संबन्धित बिषयमा बिस्तृत चर्चा गर्न सकिन्छ । नेपाल लगायत अन्य बौद्ध देशहरुमा बिद्यमान बौद्ध संस्कृतिको विशेष्तालाई कायम राख्न थप प्रयास जारी राख्न आवश्यक छ ।
( यसका लेखक अनुसन्धानकर्ता एवं बौद्ध विद्वान श्री केदार शाक्य लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका संस्थापक रजिष्टार हुनुहुन्छ । प्राचीन बौद्ध स्मारकहरुले भरीपूर्ण ललितपुरको बालकुमारीस्थित पर्यटक बस बिसौनीमा नवस्थापित शाक्यमुनि बुद्धमुर्ती स्मारिकामा प्रकाशित यो लेख साभार गरिएको होः सम्पादक)
शेर्पा संचार समूह नेपालको पाँचौं महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा ।आज शेर्पा संचार समूह नेपालको ९ अौं बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरियो ।
शेर्पा सेवा केन्द्रले बार्षीक साधारण सभा गर्ने